Paxful, Inc. Isaziso Sobumfihlo
I-Paxful, Inc. (futhi ibizwa ngokuthi “Paxful,” “thina,” “thina,” noma “yethu”) ithatha izinyathelo ukuvikela ubumfihlo bakho. Kulesi Isaziso Sobumfihlo (“Isaziso”), sichaza izinhlobo zolwazi lomuntu esiluqoqayo kusuka kuwe ngokuhlangene nokusebenzisa kwakho amawebhusayithi wethu kufaka phakathi, kodwa akukhawulelwe, https://paxful.com/, i-Paxful Wallet, ingxenyekazi yethu yokuhweba ku-inthanethi ye-bitcoin, izinhlelo zeselula, amakhasi wemidiya yokuxhumana, noma ezinye izinto eziku-inthanethi (ngokuhlangene, “Iwebhusayithi”), noma uma usebenzisa eminye yale mikhiqizo, amasevisi, okuqukethwe, izici, ubuchwepheshe, noma imisebenzi esiyinikezelayo (ngokuhlangene, “Amasevisi”).
Lesi Saziso sidizayinelwe ukukusiza ukuthi uthole ulwazi mayelana nemikhuba yethu yobumfihlo nokukusiza ukuthi uqonde izinketho zakho zobumfihlo uma usebenzisa Iwebhusayithi Namasevisi. Sicela uqaphele ukuthi iminikelo Yesevisi ingahluka ngesiyingi.
Ngazo zonke izinhloso, inguqulo yolwimi lwe-English yalesi saziso sobumfihlo izoba ngeyoqobo, ithuluzi elibusayo. Esimweni sokugqubuzana phakathi kwenguqulo yolwimi lwe-English yesaziso sobumfihlo nokuhumusha okungezansi kuya kolunye ulwimi, inguqulo yolwimi lwe-English izobusa futhi ilawule.
Imininingwane yomuntu siqu esiyiqoqayo
Siqoqa ulwazi oluphathelene nawe (“Imininingwane Yomuntu”) ngokuxhumene nokusebenzisa kwakho Iwebhusayithi, Amasevisi wethu. noma okunye esimweni sobudlelwano bethu nawe. Izinhlozo Zedatha Yomuntu esingazithola kusuka kuwe zibandakanya:
Idatha Yobuwena, kufaka phakathi:
Imininingwane ye-akhawunti ye-Paxful, okufaka phakathi:
Ulwazi Lwephrofayela Yomsebenzisi esigabeni “Bio”
Umsebenzi We-akhawunti ye-Paxful, okufaka phakathi:
Imilayezo Yengxoxo Yokuhweba (okungaqukatha ulwazi lwezimali uma ulunikezela kubathengisi)
Okunamathiselwe Kwengxoxo Yokuhweba
Idatha ephathelene newalethi yefa ledijithali, okufaka phakathi:
Idatha Eqoqwe ngokuphathelene Nokuthobelana kokuthi “Know Your Customer” (KYC), okufaka phakathi:
I-ID ekhishwe uhulumeni
Izithombe, uma ukhethe ukusinika zona
Ividiyo, uma ukhetha ukusinika zona
Idatha Yokusetshenziswa Kwedivayisi, okufaka phakathi:
I-ID yamakhukhi kanye/noma ezinye izihlonzi zedivayisi
Ulwazi oluphathelene nokufinyelela kwakho Iwebhusayithi, okufana nezinkomba zedivayisi, usuku nesikhathi
Ulwazi ezenzweni ezithathwe ngenkathi usebenzisa Iwebhusayithi
Indlela esisebenzisa ngayo imininingwane
Izinhloso zebhizinisi lapho siqoqa, sisebenzisa, sibuyisela, futhi sabelana Ngemininingwane Yomuntu ingabandakanya:
Ukunikezela Ngamasevisi ngokusebenzisa Iwebhusayithi, okufaka phakathi:
Ukubhalisa, ukudala, nokunakekela i-akhawunti yakho;
Ukugunyaza ubunikazi bakho kanye/noma ukufinyelela kwakho ku-akhawunti, noma ukusiza abathengisi ukuqinisekisa ubunikazi bakho;
Qalisa, yenza, cubungula, futhi/noma yenza imisebenzi;
Ukuxhumana nawe mayelana ne-akhawunti yakho noma amanye Amasevisi owasebenzisayo;
Yenza ukufaneleka kwesikweletu, KYC, noma okunye ukubuyekeza okufanayo
Hlaziya izinhlelo; noma
Qathanisa ulwazi ngezinhloso zokuqonda nokuqinisekisa.
Ukuze siphathe ubungozi futhi sivikele wena, abanye abantu, namaWebhusayithi namaSevisi.
Ukunikezela ngomuzwa owenziwe ngokwezifiso nokuqalisa okuncamelayo.
Ukuqonda kangcono amakhasimende nendlela asebenzisa futhi axhumana ngayo neWebhusayithi namaSevisi.
Ukunikezela ngamaSevisi, iminikelo, namaphromoshini kuWebhusayithi yethu namawebhusayithi wenkampani yangaphandle.
Ukukunikezela ngezinketho zendawo ethile, imisebenzi, neminikelo.
Ukuthobelana nezinqubomgomo nezibopho, kufaka phakathi, kodwa akukhawulelwe, ukudalula nezimpendulo ukuphendula noma iziphi izicelo kusuka kuziphathimandla zomthetho kanye/noma izilawuli ngokuya ngomthetho osebenzayo, umthetho, ukulawula, ukwahlulela noma i-oda likahulumeni, isiphathimandla sokulawula somkhawulo, isicelo sokuthola noma inqubo yomthetho efanayo.
Ukuxazulula izingxabano, izinkokhelo zokuqoqa, noma izinkinga zokuxazulula.
Ukunikezela isevisi yamakhasimende kuwe noma ukuxhumana nawe.
Ukuphatha ibhizinisi lami.
Futhi singacubungula Imininingwane Yomuntu ngezinhloso ezisuselwe kwimvume yakho uma kudingeka ngokomthetho.
Imithombo lapho siqoqa khona imininingwane yomuntu
Siqoqa Imininingwane Yomuntu kusuka kumithombo embalwa kufaka phakathi
Ngqo kusuka kuwe: Siqoqa Imininingwane Yomuntu ngqo kusuka kuwe uma usebenzisa iWebhusayithi nomaSevisi, ukuxhumana nathi, noma ukusebenzisana nathi ngqo.
Kusuka kubahlinzeki besevisi kanye/noma abacubunguli bedatha abasisiza ukunikezela iWebhusayithi noma amaSevisi: Singabandakanya abahlinzeki besevisi ukusisiza sinikezele iWebhusayithi noma amaSevisi kuwe, ekuqondeni kwethu nasengxenyeni yethu. Laba bahlinzeki besevisi bangaqoqa ulwazi ngawe futhi balunikezele kithi.
Kusuka kwabanye abasebenzisi kuWebhusayithi ye-Paxful noma kusuka kumanxusa afakwe iWebhusayithi noma amaSevisi we-Paxful: Abanye abasebenzisi bangasinikezela ngolwazi ngawe ngokuxhumana nemisebenzi noma izingxoxo. Amanxusa nawo anganikezela ulwazi kithi ngawe oluphathelene nokusebenzisana kwakho noma imisebenzi ngamanxusa anjalo.
Kusuka kuzinhlangano zangaphandle ezingasisiza ukukhomba, ukuvikela ubugebengu, nokuvikela ukuphepha kwemisebenzi.
Kusuka kuzinkampani zangaphandle ezingasisiza ukuhlaziya ukufaneleka kwakho kwesikweletu noma isimo sezimali.
Kusuka kuzinkampani zangaphandle ezingasisiza ukuhlaziya Imininingwane Yomuntu, ukuthuthukisa iWebhusayithi noma amaSevisi noma ulwazi lwakho kuwo, ukumaketha imikhiqizo noma amasevisi, noma ukunikezela ngokuthuthuka neminikelo kuwe.
Kusuka kuzinkundla zemidiya yomphakathi, uma uxhumana nathi ngemidiya yomphakathi.
Indlela esabelana ngayo idatha
Ngaphansi kwezimo ezithile, singadalula enye iDatha Yomuntu siqu ngabanye abantu. Izigaba zabantu labo esabelana nabo Imininingwane Yomuntu ibandakanya:
Abahlinzeki besevisi kanye/noma abacubunguli bedatha: Singabelana Ngemininingwane Yomuntu nabahlinzeki bezinkampani zangaphandle labo abenza amasevisi noma imisebenzi enkombeni yethu nasengxenyeni yethu. Laba bahlinzeki bezinkampani zangaphandle, bangahle, isibonelo, bakunikezele ngamaSevisi, baqinisekise ubunikazi bakho, basize ukucubungula imisebenzi, bakuthumele izikhangiso zemikhiqizo kanye namaSevisi wakho, noma ukunikezela ngosekelo lwamakhasimende.
Ezinye izinhlangano kumisebenzi, njengabathengisi: Singabelanan ngolwazi nabanye ababambhiqhaza kumisebenzi yakho, kufaka phakathi abanye abasebenzisi labo othenga kubo ifa ledijithali.
Izikhungo zezimali nezinye izinkampani ezibandakanyekayo ukukusiza ukwenza izinkokhelo ngokuhlobene nemisebenzi
Mamanxusa athola ukubhekiselwa kusuka kuWebhusayithi yethu
Ezinye izinkampani zangaphandle ngezinhloso zethu zebhizinisi noma ngokuvunyelwa noma ngokudingeka ngokomthetho, kufaka phakathi:
Ukuze uthobelane nesibopho somthetho, esilawulayo noma senkontileka, noma nanoma iyiphi inqubo yomthetho noma yokulawula (njengomyalo wenkantolo noma i-subpoena);
Ukuze uqalise, usebenzise, noma uvikele izimangalo zomthetho;
Ekuphenduleni umbuzo ngesisebenzeli sikahulumeni, njengeziphathimandla zomthetho noma i-oda lejaji;
Ukuze siphoqelele Imigomo Yesevisi yeWebhusayithi yethu noma izinqubomgomo zethu zangaphakathi;
Ukugwema ukulimala komzimba noma ukulahlekelwa kwezimali, ngokuxhumene nophenyo lomsebenzi, noma ukuvikela amalungelo wethu noma wabanye, wendawo, noma wokuphepha;
Ukuze wenze ukuthenga noma ukuthengiswa kwayo yonke noma ingxenye yebhizinisi ye-Paxful. Isibonelo, ngokwabelana ngedatha nenkampani sihlela ukuhlanganisa noma ukutholwa; noma
Ukusekela ukuhlola kwethu, ukuthobelana, nemisebenzi yokubusa yebhizinisi.
Ukudluliselwa kwangaphakathi kwemininingwane
Sicela uqaphele ukuthi singadlulisela Imininingwane Yomuntu esiyiqoqayo ngawe emazweni ngaphandle kwezwe lapho ulwazi lwakho luqoqwe khona ekuqaleni. Lawo mazwe angahle angabi nemithetho evikela idatha efanayo nezwe lapho uqale ukunikezela khona ngolwazi. Uma sidlulisela Imininingwane Yomuntu yakho kwamanye amazwe, sithatha izinyathelo ezenzelwe ukuqinisekisa ukuthi ukudluliselwa kwemininingwane kuhambisana nomthetho osebenzayo.
Amakhukhi nokukhangisa kwe-inthanethi
Ikhukhi ifayela lombhalo elincane lelo iwebhusayithi elilondolozayo kwikhompyutha yakho noma idivayisi yeselula uma ivakashela iwebhusayithi.
Iwebhusayithi yethu isebenzisa amakhukhi nobuchwepheshe bokulandela ukusebenza, nokuqondisa ukukhangisa ongaba nentshisekelo kuwe. Ngolwazi olungeziwe, sicela ubheke Inqubomgomo Yekhukhi yethu.
I-Paxful ingahlanganyela namanethiwekhi wokukhangisa wezinkampani zangaphandle ukubonisa ukukhangisa kuwebhusayithi ye-Paxful noma amawebhusayithi wezinkampani zangaphandle. Lawa mawebhusayithi namanethiwekhi wezikhangiso zezinkampani zangaphandle awalawula i-Paxful. Ozakwethu benethiwekhi yesikhangiso basebenzisa ubuchwepheshe bedatha ukuqoqa ulwazi ngemisebenzi yakho ye-inthanethi ukunikezela ukukhangisa okuqondisiwe ngokususelwe kuzintshisekelo zakho. Uma ufisha ukungatholi lolu lwazi lusetshenziselwe inhloso yokukunikezela ngezikhangiso eziqondisiwe, ungakwazi ukukhetha ukuphuma ngokuvakashela:
Sicela uqaphele ukuthi lokhu akukukhiphi ukuba unikezelwe ngokukhangisa; uzoqhubeka nokuthola izikhangiso ezingasuselwe kuzintshisakalo zakho. Ungalawula ukusetshenziswa kwamakhukhi kuleveli yesiphequluli ngasinye. Uma wenqaba amakhukhi, ungasasebenzisa Iwebhusayithi yethu, kodwa amandla akho okusebenzisa ezinye izici noma izindawo zeWebhusayithi zingakhawulelwa.
Indawo yokugcina imininingwane
Sigcina Imininingwane Yomuntu isikhathi eside ngokwanele ngezinhloso zokuthi iqoqelweni, noma izikhathi ezinjalo njengoba kudingeka ngokomthetho. Lokhu kungabandakanya ukugcina Imininingwane Yomuntu siqu ngezikhathi ukulandela umsebenzi. Senza imizamo yokusula Imininingwane Yomuntu yakho uma isingasadingeki ngezinhloso zebhizinisi ezichazwe ngenhla.
I-Paxful iqalise ukugada okwenzelwe ukuvikela Imininingwane Yomuntu yakho, kufaka phakathi izilinganiso ezenzelwe ukuvikela Imininingwane Yomuntu ukuthi ingalahleki, isetshenziswe kabi, futhi nokufinyelela okungagunyaziwe nokudalula. Futhi, i-Paxful ayikwazi ukuqinisekisa ukuvikeleka noma ubumfihlo bolwazi oluletha kithi noma oluthola kusuka kithi ngoxhumo lwe-inthanethi noma olungenazintambo. Ukudlulisela idatha nge-inthanethi kuhlala kuphatha ubungozi, ngisho noma i-Paxful yenza imizamo yokuvikela idatha uma isiyitholile.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18 ubudala
Iwebhusayithi ye-Paxful ayihloselwe izingane ezingaphansi kuka-18. Asiqoqi ngokwazi imininingwane kusuka ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-18 ngaphandle kwemvume eqinisekisiwe yomzali. Uma sibona ukuthi siqoqe ulwazi, kufaka phakathi Imininingwane Yomuntu, kusuka kumuntu ongaphansi kweminyaka engu-18 ngaphandle kwemvume yomzali, sizosula lolo lwazi khona manjalo.
Ushintsho kusaziso sobumfihlo
I-Paxful igodla ilungelo lokushintsha lesi Saziso njalo. Sizokwazisa ngoshintsho kulesi Saziso ngokuthumela inguqulo ebuyekeziwe yalesi Saziso lapha, nge-imeyili, noma ngemizamo yesaziso sekhasi lasekhaya leWebhusayithi ye-Paxful. Sincoma ukuthi uhlole njalo iWebhusayithi ngoshintsho.
Uma unemibuzo ngalesi Saziso, noma ufisa ukusibuza Ngemininingwane Yomuntu noma ubumfihlo, sicela uxhumane nathi ku-: [email protected]
Ukudalula okulandelayo kusebenza, futhi kuhloselwe, abantu abahlala ngaphakathi kwe-European Economic Area (EEA).
Isilawuli Semininingwane Yomuntu i-Paxful, Inc.
Izisekelo Zomthetho Zokucubungula Imininingwane Yomuntu
Kufika lapho sisebenzisa Imininingwane Yomuntu ukwenza izibopho zonkontileka noma izicelo ezenziwe nguwe ngokuhlobene nenkontileka, Indatshana 6(1)(b) ye-General Data Protection Regulation (“GDPR”) kuyisiseklo sezomthetho sokucubungulwa kwemininingwane yakho.
Kufika lapho sisebenzisa Imininingwane Yomuntu ukuthobelana nezibopho zomthetho ngaphansi kwe-EU noma umthetho we-Member State, Indatshana 6(c) ye-GDPR kuyisisekelo sezomthetho sokucubungulwa kwemininingwane yakho.
Kufika lapho sisebenzisa Imininingwane Yomuntu ukuvikela izintshisakalo ezibalululekile zomuntu ngamunye, Indatshana 6(1)(a) ye-GDPR kuyisisekelo sezomthetho sokucubungulwa kwemininingwane yakho.
Kufika lapho sisebenzisa Imininingwane Yomuntu ukuqalisa izintshisakalo zethu zebhizinisi elisemthethweni, Indatshana 6(1)(f) ye-GDPR kuyisisekelo sezomthetho sokucubungulwa kwemininingwane yethu. Uhlu lwezintshisakalo zethu zebhizinisi elisemthethweni kuyisigaba esingenhla esinesihloko "Indlela Esisebenzisa Ngayo Imininingwane Yakho".
Amalungelo Wokuvikela Imininingwane Wase-Europe
Umthetho wase-Europe ukunikezela ngamalungelo athile ngokuya Ngemininingwane Yomuntu yakho, kufaka phakathi:
Ilungelo lokucela ukufinyelela nokulungiswa Kwemininingwane Yomuntu yakho.
Ilungelo lokucela i-Paxful ukuthi isuse Imininingwane Yomuntu ephathelene nawe.
Ilungelo lokufaneleka kwedatha, olubandakanya ilungelo lokucela eminye Imininingwane Yomuntu oyinikezile kithi ukuthi idluliselwe kusuka kithi kuya kwesinye isilawuli semininingwane.
Ilungelo lokukhipha noma iyiphi imvume oyinikezile ku-Paxful ukuqoqa, ukusebenzisa, noma ukwabelana ngemininingwan yakho noma kunini. Sicela uqaphele ukuthi ukukhipha imvume akuthinti umthetho we-Paxful wokucubungula Imininingwane Yomuntu yakho ngaphambi kokukhipha.
Ilungelo lokuphikisana nokucubungula kwe-Paxful Kwemininingwane Yomuntu yakho, ngokususelwe kokuthile esimweni sakho.
Ilungelo lokucela ukuthi i-Paxful ikhawulele ukucubungulwa Kwemininingwane Yomuntu yakho, uma isimo esithile somkhawulo singahlangabezwa.
Ilungelo lokufaka isikhalazo nesiphathimandla sase-Europe.
Sicela uqaphele ukuthi umthetho osebenzayo unganikezela ngokukhetha kwamanye walawa malungelo, ukuvumela i-Paxful ukwenqaba isicelo sakho, noma ukuvumela i-Paxful ukukhulisa isikhathi lapho ingasebenza khona esicelweni sakho. I-Paxful nayo ingaxhumana nawe ukuqinisekisa ubunikazi bakho, njengoba kuvunyelwe ngokomthetho, ngaphambi kokwenza okuthile kusicelo sakho. Ukwenza lawa malungelo, sicela uxhumane nathi njengoba kusethiwe esigabeni esingenhla esinesihloko "Xhumana Nathi".
Singadlulisela Imininingwane Yomuntu ephathelene nabahlali base-EEA emazwani angatholiwe i-European Commission ukunikezela ngokuvikela okufanele, kufaka phakathi i-United States. Ngokudlulisela okunjalo, i-Paxful ifaka ukugada okwenzelwe ukuqinisekisa ukuthi Imininingwane Yomuntu yakho ithola ileveli yokuvikelwa ephezulu. Uma uhlala e-EEA, i-Paxful izodlulisela kuphela Imininingwane Yomuntu yakho uma: izwe lapho Imininingwane Yomuntu izodluliselwa khona inikwe isinqumo sokufaneleka se-European Commission; umamukeli Wemininingwane Yomuntu use-United States futhi uqinisekile ku-US-EU Privacy Shield Framework; i-Paxful ibeke ukugada okufanele ngokudlulisela, isibonelo ngokungena ku-EU Standard Contractual Clauses ngomamukeli, noma; ukukhishwa ekuvikelweni kokudluliselwa okuvamile kwe-GDPR. Ukuthol ikhophi yendlela i-Paxful eyenze ngayo ukusekela ukudlulisela kwayo kwemininingwane yomuntu ngaphandle kwe-EEA, xhumana nathi njengoba kusethiwe esigabeni "Xhumana Nathi" esingenhla.
Ukudalula okulandelayo kusebenza, futhi kuhloselwe, abahlali base-State of California.
Amalungelo Wakho Wobumfihlo Wase-California
Kufika lapho sidalula khona ulwazi oluhlonzekayo lomuntu ngawe kuzinkampani zangaphandle ezilusebenzisela izinhloso zabo zokumaketha, unelungelo lokucela ulwazi olungeziwe ngomamukeli wolwazi lwakho. Ukwenza leli lungelo, sicela uxhumane nathi njengoba kuchaziwe esibabeni esinesihloko "Xhumana Nathi" ngenhla.
Iwebhusayithi yethu ayenzelwe ukuphendula kumasignali noma izicelo "Ungalandeli".
I-Paxful yenzani ngemininingwane yakho?
Izinkampani zezezimali ziyakhetha ukuthi zabelana kanjani ngemininingwane yakho. Imithetho kahulumeni inika amakhasimende ilungelo lokunciphisa ukwabelana ngemininingwane ethile kodwa hhayi yonke. Umthetho kahulumeni uphinde udinge ukuba sikutshele indlela esiqoqa ngayo, sabelane ngayo futhi sivikele imininingwane yakho. Sicela ufunde lesi saziso ngokucophelela ukuze uqonde lokho esikwenzayo.
Izinhlobo zemininingwane yomuntu esiyiqoqayo nesabelana ngayo ixhomeke emkhiqizweni noma insiza onayo nathi. Le mininingwane ingahlanganisa:
Inombolo Kamazisi noma izimali eziku-akhawunti
Umlando wokukhokha noma umlando wokuthengiselana
Umlando wesikweletu noma amaphuzu esikweletu
Lapho usuyekile ukuba yikhasimende lethu, siyaqhubeka sabelana ngemininingwane yakho njengoba kuchaziwe kulesi saziso.
Zonke izinkampani zezezimali kudingeka zabelane ngemininingwane yamakhasimende azo ukuze zikwazi ukwenza imisebenzi yansuku zonke yamabhizinisi azo. Engxenyeni engezansi, kunohlu lwezizathu ezibangela ukuba izinkampani zezezimali zikwazi ukwabelana ngemininingwane yamakhasimende azo; izizathu ezenza i-Paxful ikhethe ukwabelana ngemininingwane; nokuthi ungakwazi yini ukunciphisa ukwabelana ngemininingwane.
Izizathu ezenza sikwazi ukwabelana ngemininingwane yakho
Ingabe i-Paxful iyabelana ngemininingwane?
Ingabe ngingakunciphisa lokhu kwabelana ngemininingwane?
Ngenxa yezinjongo zokusebenza kwansuku zonke kwebhizinisi - njengokuphrosesa ukuthengiselana kwakho, ukunakekela ama-akhawunti akho, ukusabela esiqondisweni senkantolo nasophenyweni lwezomthetho, noma ukubika ezinkampanini eziqoqa imininingwane yezezimali
Ngezinjongo zokuthengisa nokukhangisa - ukukuhlinzeka ngemikhiqizo yethu nezinsiza
Ukuze sibambisane nezinye izinkampani zezezimali ekuthengiseni nasekukhangiseni
Ngezinjongo zomsebenzi wansuku zonke zenxusa lebhizinisi - imininingwane mayelana nokuthengiselana kwakho nalokho ohlangabezane nakho
Ngezinjongo zomsebenzi wansuku zonke zenxusa lebhizinisi - imininingwane mayelana nokukhokhwa kahle kwezikweletu zakho
Ngezinjongo zokuthola izikhangiso ezivela ezinkampanini eziseceleni esingaxhumani nazo
Sivela kubani lesi saziso?
Isaziso sobumfihlo sihlinzekwa yi-Paxful futhi siyasebenza ku-akhawunti yakho ye-Paxful.
I-Paxful iyivikela kanjani imininingwane yami?
Ukuze sivikele imininingwane yakho ekutholweni nasekusetshenzisweni abantu abangagunyaziwe, sisebenzisa izinyathelo zokuphepha ezivumelana nomthetho kahulumeni. Lezi zinyathelo zihlanganisa izivikelo zekhompyutha, amafayela agcinwe endaweni ephephile kanye nezakhiwo.
I-Paxful iyiqoqa kanjani imininingwane yami?
Siqoqa imininingwane yakho, ngokwesibonelo, lapho
uvula i-akhawunti noma usinikeza imininingwane ye-akhawunti
usinika imininingwane yokuxhumana noma lapho uthumela imali
usebenzisa i-akhawunti ye-Paxful ukuze uthumele noma wamukele izimali
Siphinde siqoqe imininingwane yomuntu kwabanye, njengezinkampani eziqoqa imininingwane yezezimali, kanye nakwezinye izinkampani.
Kungani ngingakwazi ukuvala konke ukwabelana ngemininingwane?
Imithetho kahulumeni ikunika ilungelo lokuba unciphise kuphela
ukwabelana ngemininingwane ngezinjongo zomsebenzi wansuku zonke wenxusa lebhizinisi — imininingwane emayelana nokukhokhwa kahle kwezikweletu zakho
ukusetshenziswa kwemininingwane yakho yinxusa ukukuthumelela izikhangiso
ukwabelana ngemininingwane ukuze izinkampani eziseceleni zikuthumelele izikhangiso
Imithetho kahulumeni kanye nezinkampani zingase zikunike amalungelo engeziwe okunciphisa ukwabela ngemininingwane. Bheka ngezansi ukuze uthole okwengeziwe ngamalungelo akho ngaphansi komthetho kahulumeni.
Izinkampani eziphethwe noma ezilawulwa umuntu oyedwa. Zingaba yizinkampani zezezimali noma zingabi izinkampani zezezimali.
Amanxusa ethu ahlanganisa izinkampani ezilawulwa yi-Paxful Holdings, Inc.
Izinkampani ezingalawulwa umuntu oyedwa. Zingaba yizinkampani zezezimali noma zingabi izinkampani zezezimali.
Abangewona amanxusa esabelana nabo imininingwane yomuntu bahlanganisa abahlinzeki bezinsiza abasenzela izinkonzo noma imisebenzi.
Isivumelwano esiphakathi kwezinkampani ezingewona amanxusa ezisebenza ndawonye ukuze zithengise futhi zikhangise imikhiqizo noma izinsiza kuwe.
Esibambisene nabo emaketheni bahlanganisa izinkampani zezezimali.
Eminye imininingwane ebalulekile
Singase sithumele imininingwane yomuntu kwamanye amazwe, ngokwesibonelo, kwabasiza amakhasimende noma ukuze kuphroseswe ukuthengiselana.
California: Uma i-akhawunti yakho ye-Paxful inekheli le-imeyili lase-California, ngeke sabelane ngemininingwane yakho esiyiqoqayo ngaphandle uma umthetho wase-California uvuma.
Vermont: Uma i-akhawunti ye-Paxful inekheli lase-Vermont, ngeke sabelane ngemininingwane yakho esiyiqoqayo nezinkampani ezingewona amanxusa ngaphandle uma umthetho uvuma noma uma wena unikeza imvume.